Wararka Suuqa Maanta: Manchester United oo Waqtiga u qabatay Paul Pogba, Xanta Kylian Mbappe iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Manchester United oo Waqtiga u qabatay Paul Pogba, Xanta...
Wararka Suuqa Maanta: Manchester United oo Waqtiga u qabatay Paul Pogba, Xanta Kylian Mbappe iyo Qodobo kale
Kooxda Man City ayaa rumaysan in ay ka sarayso kooxaha ay xafiiltamaan ee Liverpool, Man United, Chelsea iyo Bayern Munich tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Uruguay ee Benfica Darwin Nunez (DailyStar).
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds iyo xulka England Kalvin Phillips ayaa aad u daneynaya inuu saxiixo qandaraas cusub oo la hagaajiyay oo ka socda Elland Road. 25 jirkaan ayaa weli waxaa uga harsan qandaraaskiisa haatan labo sanno. (TheAthletic)
Weeraryahanka reer Uruguay ee Manchester United Edinson Cavani, oo 34 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu ku biiro Real Madrid bisha Janaayo, ka dib markii uu hoos uga dhacay dalabkii Old Trafford ka dib imaatinka Cristiano Ronaldo. (Mundo Deportivo)
Manchester United ayaa dooneysa inay hesho go’aan kama dambeys ah oo ku aadan mustaqbalka xiddiga qadka dhexe ee reer France Paul Pogba ugu danbeyn ciida Kirismaska. (Thesun)
Real Madrid ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto 28 jirkaan xagaaga soo socda wakiilka Mino Raiola. (Express)
Bayern Munich ayaa ku dhow inay heshiis cusub ka saxiixdo weeraryahanka Jarmalka Serge Gnabry, oo 26 jir ah (Fabrizio Romano on Twitter)
Paris St-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay xoog saareyso tartanka loogu jiro saxiixa 21 jirka weerarka uga ciyaara Norway Erling Braut Haaland oo ka tirsan Borussia Dortmund xagaaga dambe. (Mirror)
Liverpool ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo 17 jirka Kacper Kozlowski oo aad loo qiimeeyo kana soo jeeda Pogon Szczecin. Waxay tartan kala kulmayaan AC Milan, RB Leipzig iyo RB Salzburg , kuwaas oo la sheegay inay sidoo kale xiiseynayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Poland. (Mirror)
Chelsea ayaa xiiseyneysa 17-jirka weerarka uga ciyaara Faransiiska Mohamed-Ali Cho oo ka socda Angers . Da’yarka reer France ayaa 21 jeer ka ciyaaray Ligue 1 xilli ciyaareedkii hore waxaana la sheegay inuu yahay mid ka mid ah rajooyinka ugu wanaagsan kubadda cagta (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Cagliari Nahitan Nandez oo 25 jir ah ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda sida uu sheegay wakiilkiisa. Xiddiga reer Uruguay ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha Tottenham iyo Leeds iyo waliba Napoli. (Calcio Napoli 24)
Steve Bruce ayaa sii ahaan doona tababaraha kooxda Newcastle iyadoo milkiilaha Mike Ashley mudnaantiisa ay weli tahay inuu helo iibsadaha kooxda. (Thesun)
Weeraryahanka reer France Karim Benzema, oo 33 jir ah, ayaa ku adkeysanaya in ninka ay isku dalka yihiin, weeraryahanka Paris St-Germain Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, uu maalin maalmaha ka mid ah ku biiri doono Real Madrid . (Thesun)
West Ham, Everton iyo Arsenal ayaa dhamaantood doonaya inay la soo wareegaan weeraryahanka Real Betis Nabil Fekir laakiin Betis ayaa weli dooneysa inay sii haysato adeega 28 jirka reer France. (Fichajes)
Real Madrid ayaa ka fikireysa inay lasoo wareegto Leicester Ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans, 24, taasi keeni karta bixitaanka ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Casemiro, 29 sano jir ah,(El Nacional)
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay weeraryahanka Manchester City ee England Raheem Sterling, oo 26 jir ah, u keento La Liga sanadka cusub. (OnzeTV on Twitter)
Arsenal ayaa sidoo kale il gaar ah ku heysa Sterling, iyadoo weeraryahanka uu ka mid yahay bartilmaameedyada ugu sarreeya ee tababare Mikel Arteta. (DailyStar)
Previous articleXubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo howl-gal qorsheysan lagu dilay
Next articleLiverpool oo ku dhow inay heshiis la gaarto xiddiga reer Poland Kacper Kozlowski
Cristiano Ronaldo oo Doonaya In Zinedine Zidane uu Qabto Shaqada Manchester...